Japana: Mahazo Fanohanana Avy Amin’ny Tanàna Japoney i Obama · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2018 19:08 GMT
(Nivoaka tao amin'ny Voices without Votes ihany koa ity lahatsoratra ity)
Mitombo ny fientanam-po anatinà tanànan'ny mpanjono matoritory ao amorontsirak'i Japana. Nahazo jery tsy mahazatra ny tanànan'i Obama, izay midika hoe “morontsiraka kely” amin'ny teny Japoney, noho ny fifanojoan'ny anarany amin'ny anaranà mpifaninana iray ho filoham-pirenena Amerikana.
Amidy anatin'ireo trano fivarotana ao an-toerana ny entambarotra misy an'i Obama, miala amin'ireo ambonin'akanjo mankany amin'ny “manju”(sakafo Japoney) sy ny hazo fihinanan-kanina ametahana ny endrik'i Obama, ary apetaka isaky ny kihon-dàlana ao an-tanàna kosa ireo petadrindrina. Nandritra ny Talata Milay, nikarakara hetsika “fijerim-bahoaka” ny andianà mpilatsaka antsitrapo iray izay manohana an'i Obama, natrehanà mponina manodidina ny 300 manao ambonin'akanjo sy fehiloha Obama. Ho fanampin'izany fientanam-po izany, nandray taratasy iray avy amin'ny Senatera ny ben'ny tanànan'i Obama maneho fankasitrahana manoloana ny fanohanan-dry zareo.
Mizara ny fientanam-pon'ny tanàna ny bilaogera[Ja] iray:
Tena mahagaga ny fahatongavanà taratasy iray avy any amin'i [Senatera] Obama ho an'ny tanàna.
Na dia noho ny fanohanana avy aminà toerana iray tsy manan-kery [eo amin'ny fifidianana] aza.
Mampiseho ny angezan'Atoa Obama amin'ny maha olona azy izany.
Heveriko fa manamarika ny fahasamihafana goavana misy [eo aminy] sy ilay olon-kafa iray izay mifaninana amin'ny alàlan'ny fampiasàna ny herimpom-badiny sy ny lanjan'ny anarany io.
Amin'ny lafiny iray hafa, maro ireo bilaogera no naneho fijery mitsikera ary nanamarika fa toa tsy manan-danja ho an'ilay “hetsi-panentanana” Obama Japoney ny pôlitikan'io mpifaninana io sady tsy ampy fahatsapana ara-politika.
Manoratra i stoyachi fa:
Na izany aza, tsy fantatra ny traikefa ara-pôlitikan'i Obama. Tsy fantatsika akory aza izay karazanà pôlitika hapetrany ho an'i Japana.
Naneho ny tsikerany ny iray amin'ireo mpampiasa ny BBS (Bulletin Board System) anà gazety:
Koa satria tsy manan-jo handatsa-bato izy ireo amin'ity fifidianana ity, angamba tsy maninona raha mifety sy mijerijery ry zareo.
Na izany aza, tsy mihevitra aho fa ny vahoakan'ny Tanànan'i Obama rehetra no manohana an'Atoa Obama, ary tsy izay ihany, fa ny fandaniam-bola amin'ny fandefasana entana, sy ny firariantsoa ataon'ny ben'ny tanàna izy tenany [amin'i Obama] — heveriko fa misy zavatra tsy milamina amin'izany.
Mitarika ny fampielezankevitra amin'ny fanehoany ny finoany mba hahatonga azy ho filoham-pirenena izay handrafitra ny ho avin'i Etazonia Atoa Obama.
Ny fiainan'ny vahoaka Amerikana no lalaovina. Andraikitra goavana izany.
Na izany aza, tsy hafahafa ve ny fanohanan'ny orinasam-panjakana iray an'i Obama noho ny fitovian'anarana fotsiny ihany, fa tsy noho ny fiombonany hevitra amin'ny hafatr'Atoa Obama sy ny fitsipiny?
Na dia tsy tena tsikera tanteraka aza dia mitondra fijery iray mivantambantana ity bilaogera ity:
Toa tsy misy pôlitika sy tsy misy fitsipika nefa heveriko fa tsy maninona izany. Na dia ho lasa filoha aza i Obama, tsy mihevitra aho fa hitsidika velively ny tanànan'i Obama izy, tsy ratsy ny fivoaran'ny tanàna ambanivohitra sy ny fananany tanjaka betsaka amin'izao vanim-potoana izao. Tsy maintsy misy olona marobe izay mitondra ny anarana hoe Obama ao anatin'ny tanànan'i Obama. Etsy andaniny, tsy misy tanàna antsoina hoe “Kurinton (Clinton)” ao Japana. Ataoko fa tsy hisy mihitsy divay hanana anarana hoe “Clinton's Tears” ( Ranomason'i Clinton). Ny anarany fotsiny dia tsy mandrisika ahy hisotro satria toa “maina be”.